Trick si aad si toos ah u faaruqiso qashinka dib u cusbooneysiinta ee Windows 10 - TELES RELAY
ACCUEIL » QODOBO »Trick waa inaad si toos ah ugu faaruqisaa qashinka dib u rogidda ee 10
Sadarrada si aad si toos ah ugu faaruqiso qashinka dib u cusbooneysiinta ee Windows 10
Qalabaynta dib-u-warshadaynta ee nidaamka waxay leedahay door muhiim ah: waxay u oggolaaneysaa in ay soo celiso feylasha si khalad ah loo tirtiray. Faylasha waxay ku jiri kartaa halkaas muddo dheer. Marka ay aad u xun yihiin, waxay u badan tahay inay dhibaato noqdaan gaar ahaan haddii goobtu ay yar tahay. Nidaamkan, faaruqinta dib u rogidda Windows dib u habeyntu waa in si joogto ah loo sameeyaa. Haddii aad tahay mid ka mid ah dadka isticmaala Windows oo qashinka u dhifanaya, dhadhan yar ayaa kuu ogolaanaysa inaad ka tagto hawshan.
1. Waxaad tagtaa goobaha Windows adigoo isku duba ridaya "Windows + I". Waxaad sidoo kale aadi kartaa nidaamka nidaamka adoo galaya "Settings" ee ku qoran Miiska Start.
2. Kadibna Gali Nidaamka> Kaydinta
3. Guji "Beddel sida aan si dhakhso ah u nadiifinno booska"
4. Ka shaqee "Sens Sensation", kaaliyaha kaydinta. Waxaad awood u yeelan kartaa in aad si toos ah u bilowdo inta jeer ee la doorto (maalin kasta, asbuuc kasta, ama bil kasta), ama marka goobta booska diskooga yar yahay.
5. Ku qor "Faylasha Ku-meel-gaadhka ah", dooro "Delete faylasha ku-meel-gaarka ah oo aan codsigeyga isticmaalin" sanduuq. ». Waxaad markaa sheegi kartaa qiimaha tirtirka faylasha qashinka (marnaba, maalmaha 1, maalmaha 14, maalmaha 30, 60).
Iyadoo kaaliyaha kaydinta, nidaamku si toos ah ayuu ugu faaruqi doonaa qashinka dib u rogka ee ku xiran inta jeer ee la doorto.
Haddii ay dhacdo in si lama filaan ah loo tirtiro, ogsoonow inaad isku dayi karto inaad dib u soo celiso faylasha la tirtiray adigoo isticmaalaya a software-ka soo kabashada. Qalabkani waa mid wax ku ool ah, gaar ahaan marka uu yahay tirtirid dhowaan ah oo dhaqdhaqaaqa yar yarna ku jira darawalkaaga adag (ku darista, guuritaanka ama nuqul ka sameynta faylasha, xoqitaanka, iwm.).
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore http://www.logitheque.com/articles/lastuce_pour_vider_automatiquement_la_corbeille_sur_windows_10_3144.htm
Jimicsiyada 7 si ay uga takhalusaan cufurada dhabarka iyo dhinacyada - SANTE PLUS MAG
Arooskani wuxuu ka helay hilibka si uu nolosheeda ugu fududeeyo musqusha iyada dharkeeda: waxaan jecelnahay!